Aside | Formats | News From Somalia
Kulan ay magaalada Muqdisho ka dhacay Sheekh Nuur Baaruud iyo Bashiir Axmed Salaad kaaso looga hadlayo sharci ama cadaalad aan ahayn tan Raxmaanku raali ka yahay,waxaana howshaas iska leh oo wata xafiisjka Mahiiga UNPOS oo ay mudaba Mushaar ka qaataan.
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay labadaan Wadaad is cadeeyaan inay dagaalka ugu jiraan dhinaca Amisom, waxayna usoo saari jireen fataawaat AMISOM sharciyeynaya balse hadda waxay cadeysteen in ay kamid yihiin kuwa saamiga ku leh Dowlada Xasan Gurguurte hogaanka u yahay!
Culumada Ictisaam ee ku jira hay’addiisa baa dhowaan ummadda Soomaaliyeed u sheegeysay in qofkii saas sameeya gaal yahay! Xitaa haddii qofkaasi aaminsan yahay in diinta Islaamku ka fiican tahay waxaasoo oo dhan! Waxaan shaki lahayn inay tahay gaalnimo ciddii qof ku tiraahda dastuur ansixi? Hadday Ictisaamku dhaheen qofkii dastuur dejiya waa gaal; Golaha Baraaruggu wuxuu leeyahay: qofkii qof ku dhaha dejiya dastuur ay sheegeen in lagu gaaloobayo inuu isna gaal yahay?
Teeda kale maxay Ictisaamku mar hore u hadli waayeen? Ma goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen bay qeylinayaan.
Daawo/Dhageyso: Bashir Salaad Oo Leh hala Saxo Qoddobada sida Toos ka ah uga Hor imaanaya Islaamka? Muxuu yahay Mufhuumu Mukhaalifah!
Maantay waxay Wadaaddada Al-Ictisaam iyo Islaaxa la maraysaa in ay Caddaalad iyo Garsoor ka raadiyaan Dastuur gaaleedka iyo Dimuquraadiyadda!
Boqolsoon iyo Daaquudka,waxaan Rabbi raali ka ahayn oo loo xukun tago.
Tolow waa maxay Caddaaladda iyo Garsoorka aan Quraanka iyo Sunada Nabiga CS aanan laga raadinaynin meesha ay taalo?. Arintaan waxay nasoo xasuusinaysaa, Maxkamadda Maraykanka (Rewards for Justice Program), Maxkamadda Barnaamijka Abaal marinta Caddaaladda, Maxkamaddaas Malaayiin ayey duldhigtay Culimo iyo Ducaad Muslimiina, marka Bashiir Salaad oo Ictisaamka hogaamiye u ah iyo Nuur Baaruud Caddaaladda iyo Garsoorka ay ka hadlayaan waa Caddaaladarro iyo Garsoor la dagaalamaya hirgalinta Shareecada Islaamka.
Gaari Taw ah ayaa saakay ciidanka shisheeye looga gubay gudaha ee Sh/hoose oo kamid ah meelaha uu ka soconayo dagaalka ugu adag ee u dhexeeya Mujaahidiinta Alshabaab iyo ciidanka shisheeye ee Amisom .
Gaariga Tawga ah shisheeyaha looga bur buriyay weerar miino oo ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Ow Dhiigle iyo Bariirre.
Shisheeyaha ayaa u muuqda inay qasaarooyin xoogan kala kulmayaan socdaalka aan ka fiirsiga lahayn ee ay ka dhexsamayanayaan deegaanada ay ku soo faafeen.